Bahlukene phakathi emjondolo ngokuvota
UMnuz Ntuthuko Figlan uthi ngeke avote ngoba ayikashintshi impilo yakhe Isithombe:NQOBILE MBONAMBI/ANA
Boniswa Mohale | October 13, 2021
KUHLUKENE imibono ngokhetho kubantu abahlala emijondolo yakuKennedy Road, eThekwini njengoba abanye bethi ngeke bavote kodwa abanye bathi bazolisebenzisa ilungelo labo bayovota.
Isolezwe lihambele le mijondolo ukuthola ukuthi ngoNovemba 1, ngabe abantu bazophuma ngobuningi babo yini ukuyokhetha abazobamela.
UMnuz Themba Quva oseneminyaka engaphezu kuka-10 ehlala kuKennedy Road, uthe uzovota ngoba ufuna ukuba nendlu nokuthi kuvuleke amathuba omsebenzi.
“Ngizobheka ukuthi abakhankasayo bathini bese ngivotela labo abathembisa okungcono yize-ke nakudala babesithembisa kodwa bangazifezi izithembiso.
Lukhona ushintsho lapha emjondolo yingakho ngizovota. Sinawo amanzi kodwa ugesi asinawo, siyafisa ukuba nogesi osemthethweni hhayi lo wezinyokanyoka,” kusho uQuva.
UNksz Thembisa Nobhala uthe ngeke avote ngoba noma bekuthiwa uyafisa ukuvota ngeke akwazi njengoba engenawo umazisi.
“Ngeke ngivote ngoba alukho ushintsho empilweni yami.
Anginawo umazisi. Uma ngiyowushaya kuthiwa kufanele ngibuyele esikoleni engangifunda kusona. Ngizobuyela ngani emakhaya, ngibe ngingasebenzi eThekwini. Ngiphila ngokuwasha izimpahla zabantu nokubawashela izitsha, bangiphem oR20 ukuze ngilale ngidlile.
Ngiyacela ongangisiza ngenkinga kamazisi ngoba imile impilo yami,” kusho uNksz Nobhala.
Uveze ukuthi unezingane ezintathu ezihlala kubo kanti zona zinazo izitifiketi zasizwa wukuthi zenzelwe wugogo wazo.
UMnuz Ntuthuko Figlan naye uthe ngeke avote ngoba kade ayevota kodwa akasebenzi futhi akaholi nemali yabanokukhubazeka njengoba engezwa kahle ezindlebeni.
“Sengineminyaka ngigqigqa esibhedlela, abafuni ukungibhalisela impesheni yabanokukhubazeka. Izindlebe zami azizwa, ngisho enkampanini yokwakha engangizoqashwa kuyona ngagcina sengilahlekelwa yitoho ngenxa yokuthi angizwa. Ngeke ngivote ngizobe ngizihlalele la emjondolo,” kusho uFiglan.
UMnuz Xolani Ngubane uthe uzovota ngoba ufuna ushintsho.
“Ngiyawufunda usomqulu wamaqembu wezethembiso uma ekhankasa bese ngivotela osho okuhambisana nami. Angineme ngezinga lokulethwa kwezidingo emjondolo ngoba ngifuna indlu, ugesi nomsebenzi. Esizobavotela siyadinga ukuthi basivulele amathuba omsebenzi,” kusho uNgubane.
Uthe abaholi kufanele bakhumbule abantu ngaso sonke isikhathi babalethele nokudla hhayi ukuthi benze lokho uma bekhankasa.
UMnuz Mzwandile Ngobese ugqugquzele abantu ukuthi baphume bayovota ukuze bathole izidingo.
Ukhale ngokuthi bahlushwa ngamanzi kuKennedy Road ngoba uma ezophela abasitholi nesixwayiso.
Uthe kusebenza ugesi wezinyokanyoka okuthi uma kushe izigubhu kuthathe isikhathi ukuba zilungiswe.
“Siyafisa ukuthi esizobavotela basakhele izindlu, amathuba omsebenzi nezindlu zangasese ezisebenza kahle uma siselana emjondolo. Siyayidinga nemfundo yamahhala kungabi wukuthi iNational Student Financial Aid Scheme ixhasa idlanzana. Kubalulekile ukuthi abantu bathole imisebenzi ukuze bazimele,” kusho uNgobese.
UMnuz Themba Quva ohlala kuKennedy Road Isithombe:NQOBILE MBONAMBI/ANA
UNksz Thembisa Nobhala uthi ngeke avote Isithombe:NQOBILE MBONAMBI/ANA
UMnuz Xolani Ngubane uthi uzovotela ukuthi kube noshintsho Isithombe:NQOBILE MBONAMBI/ANA
UMnuz Mzwandile Ngobese uthi abantu abavote Isithombe:NQOBILE MBONAMBI/ANA
Ukhale ngokuthi bahlushwa amanzi kuKennedy Road ngoba uma ezophela abasitholi nesixwayiso.
Ugesi uthe kusebenza owezinyokanyoka okuthi uma kushe izigubhu kuthathe isikhathi ukuba zilungiswe.
“Siyafisa ukuthi esizobavotela basakhele izindlu, amathuba omsebenzi nezindlu zangasese ezisebenza kahle uma siselana emjondolo. Siyayidinga nemfundo yamahhala kungabi wukuthi uNational Student Financial Aid Scheme ixhasa idlanzana. Kubalulekile ukuthi abantu bathole imisebenzi ukuze bazimele,” kusho uNgobese.